Izinto ezi-5 ezimangalisayo endizifundileyo ngeTequila kuTyelelo lwam lwaseMexico - Uhambo
Eyona Uhambo Izinto ezi-5 ezimangalisayo endizifundileyo ngeTequila kuTyelelo lwam lwaseMexico
Izinto ezi-5 ezimangalisayo endizifundileyo ngeTequila kuTyelelo lwam lwaseMexico
Owona mmangaliso mkhulu yayikhephu. Ngelixa yayiyi-70 degrees kwi-NYC, yayikhithika emazantsi eMexico okokuqala kwiminyaka eyi-120. Izityalo ze-agave zazingazi ukuba zithini na.(Ifoto: Sage Lazzaro / Braganca)
Ndaya eMexico kangangeentsuku ezine, kwaye yayiyikhosi yengozi e-tequila ukuba ikhe yakho.
Ndifunde ubeko lomhlaba we tequila, ndikhwele kweyona ndawo inzima ukufikelela kumabala e-agave afikeleleka kuphela ngeimeyile okanye nge-ATV. Ndixhome nabantu bendawo, ndathatha iklasi yokupheka kwindawo efanelekileyo yokutya yaseMexico, ndakhangela indawo yokuhambisa izixhobo zeAltos tequila kwaye ngokucacileyo ndasela umoya wobulali.Ndifunde okuninzi ngotywala uninzi lwethu olunxulumana nobusuku obuthile. Nazi izinto ezintlanu ezimangalisayo endizifumeneyo:
Kuphela ngabakhenkethi kunye neehipsters eziodola nantoni na eMexico
Njengomntu wasekhaya ubeka, Ukuba ukwi-bar eMexico kwaye u-odole into ngaphandle kwe-tequila, ngokucacileyo awuveli apha okanye uyenza ngokwahlukileyo ekuqwalaselweni.
Ndakuva oku kanye ekuqaleni kohambo lwam kwaye ndinike ingqalelo kwinto yokuba wonke umntu wayesela ejikeleze mna (nakwisikhululo seenqwelomoya), kwaye kuyinyani. Xa kufikwa kwimimoya, wonke umntu wayeyisela i-tequila ngalo lonke ixesha. Izitrato zizele ziivenkile ezithengisa i-tequila kuphela, kwaye imivalo kunye neeresityu azithwali ezinye iziselo ezinxilisayo. Nganye ayinazo ngaphezu kweebhotile ezimbini okanye ezintathu zevodka, irum, igin kunye newiski. Sela iflegi.(Ifoto: Twitter.
Abayithathi i-tequila shots, nanini
EMexico, basela i-tequila ngqo okanye bayixube nesoda yeklabhu, mhlawumbi ngokutshiza ijusi yeziqhamo. Iicocktails zinqabile, abantu abaseli nyani imargaritas kwaye ngokuqinisekileyo abayithathi i-tequila shots. Ekufutshane nabo beza kudubula yi-bandera. KwisiNgesi, igama lithetha iflegi, kwaye isiselo siqulathe iiglasi ezintathu zokudubula zigcwalisiwe kwaye zilungiselelwe ukubonisa imibala yeflegi yaseMexico. Kuluhlaza, iglasi enye igcwele ijusi yelamuni. Ngomhlophe, enye igcwele i-blanco tequila. Kwaye ngombala obomvu, iglasi yokugqibela igcwele i-sangrita, isonka esine-tomato esuselweyo. Nangona ezi zizithonga, awuzithathi zinjalo. Ujikeleza ngokulula ususa into encinci kwinto nganye.
Umxhasi yi-tequila e-crappy eMexico
Kukho i-tequila emangalisa kakhulu eMexico kangangokuba iimveliso zepremiyamu eMelika azifakwanga. Umntu wasekhaya wandixelela ukuba umxhasi, ishelffu ephezulu kunye noyena mntu udlakadlaka malunga nomoya e-US, uthathwa njengophawu lwenkohliso eMexico. Ivili lamatye lijikeleza ukusika ii-agave fibers kwindawo yeAltos eArandas, eMexico.(Ifoto: Sage Lazzaro / Braganca)
Indlela eyenziwe ngayo i-tequila iyatshintsha, kwaye ayisiyongcono
Indlela yesiko yokwenza i-tequila ishiywe zizinto ezininzi zokucoca kwaye yatshintshwa yinkqubo yemveliso ebaninzi ebavumela ukuba bakhuphe i-tequila engaphezulu kodwa banciphisa kakhulu umgangatho wokungcamla. Uvavanyo lokungcamla oluyimfama lwee-tequila ezintandathu lubonakalisile kum.
Emva kokuvuna, ubuchule obuzukise ixesha lufuna ipiña, i Isiseko sesityalo se-agave, ukuze kuphekwe umphunga kangangeentsuku ezintathu ehovini kungabikho xinzelelo. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, nangona kunjalo, indlela yokupheka yoxinzelelo ngamanye amaxesha ekuthiwa yi-microwave ye-tequila yaziswa, ngoku ivumela abenzi ukuba bayipheke iiyure ezili-10 kuphela. Ngelixa isebenza ngokukuko, ipheka i-agave ngokwahlukileyo kwaye ihlala ivelisa incasa engathandekiyo, ngamanye amaxesha ikrwela ngaphandle ngaphandle kokupheka phakathi yonke indlela. Kwiminyaka eyadlulayo, inyathelo lesibini, elityumza i-agave ebhakaweyo, laligqityiwe. Ngokwesiko, oku kwenziwa ngendlela yeTahona, ebandakanya ukuqengqa isondo ngamatye ngaphezulu kwe-agave ebhakwe. Ndisibonile esi sandla xa bendindwendwela iAltos distillery eArandas, apho basebenzisa ivili elenziwe ngothuthu lwentaba-mlilo olwalukrolwe ngesandla ngamanundu amane. Ngaphandle kwabavelisi be-tequila abaqinisekisiweyo abali-150, iAltos yenye yezintandathu kuphela ezisasebenzisa indlela yeTahona (basebenzisa nee-oveni zemveli). Kuvavanyo lokungcamla okungaboniyo, imveliso yabo ikhanya ngaphezulu kokuthandwa kweemveliso ezithandwayo ezinje ngoDon Julio kunye no-1800, abo blancos banambitha imichiza yabo ngokuthelekisa.
I-Tequila ibizwa ngegama lomzi apho ivela khona
I-spirt yathiywa ngegama lendawo yokuzalwa-idolophu ebizwa ngokuba yiTequila kwiphondo laseJalisco eMexico. Ukuthandwa kotywala kukhokelele ekubeni le dolophu ibe yiNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi kwaye bayifumana igama elithi Pueblo Mágico, okanye iDolophu yeMagical, ngurhulumente waseMexico.
'Umfokazi: Umnqophiso' Unikezela ngeeNdleko eziTshiphu, kwaye iNdawo eseleyo ayinanto
Inkqubo ye-LCD Soundsystem iphela iBrooklyn Steel Show ngeCold Kid Crowd-Pleaser
UKumkanikazi weBeyHive: UBeyonce wavula iBhlog
yimalini ejonge kwangoko
nini irishman uza kuba kwi-netflix
uluhlu lwethelevishini ka-2017
Umvuzo omncinci kwi-nj 2016
iisayithi ezinje ngomfumani womhlobo wabantu abadala
ukulahla i-movie tom hanks
Iiprobiotic kulungelelwaniso lwabafazi